Ny Sarimihetsika James Bond ankehitriny dia mampiakatra ny fitakiana fizahantany any Jamaika any UK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny Sarimihetsika James Bond ankehitriny dia mampiakatra ny fitakiana fizahantany any Jamaika any UK
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Entertainment • Films • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Talen'ny fizahantany, Donovan White (2nd l) dia mizara fotoana fohy amin'ireo mpanatanteraka maneran-tany Amadeus, filoha lefitra, Tom Starr (l) ary tale, Alex Rayner (c); Talen'ny faritra JTB an'ny UK sy Eoropa Avaratra, Elizabeth Fox (2nd r) sy Delano Seiveright, Mpanolotsaina ambony sy stratejika ao amin'ny Ministeran'ny Fizahantany, tao amin'ny World Travel Market any Londres, Angletera, ny alarobia 3 Novambra.
Ireo mpanatanteraka ambony ao amin'ny Amadeus, orinasa eoropeanina momba ny teknolojia fitsangatsanganana manerantany, dia nampahafantatra ireo tompon'andraikitra ambony ara-pizahantany Jamaikana androany fa ny famoahana ny sarimihetsika James Bond farany indrindra amin'ny 30 Septambra, No Time to Die, izay manana sehatra maro ao Jamaika, dia manampy amin'ny fitarihana ny fahalianana amin'ny Jamaika, indrindra any Royaume-Uni.
Nanamarika ireo mpanatanteraka ao amin'ny Amadeus fa mahita fikarohana sy famandrihana avo lenta ary fitakiana ho an'i Jamaika izy ireo.
Ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Kolontsaina ary ny JAMPRO dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fanomezana lozisialy, fifandraisana amin'ny besinimaro ary fivarotana ny sarimihetsika Bond farany.
I Jamaika no trano ara-panahin'i Bond, miaraka amin'i Ian Fleming manoratra ny bokin'i Bond ao an-tranony, “Goldeneye.”
No Time to Die dia toa vonona ny handresy Avengers: Endgame any UK, maka ny toerana fahadimy amin'ny lisitry ny famoaham-boaty be indrindra amin'ny fotoana rehetra avy amin'ny blockbuster superhero an'i Marvel.
Ny lahateny dia nomen'i Tom Starr sy Alex Rayner, filoha lefitra sy talen'ny Amadeus tsirairay avy, tao amin'ny World Travel Market any Londres, Angletera. Ny teknolojia sy ny vahaolana an'i Amadeus dia toy ny hazondamosina sy hery ny indostrian'ny fitsangatsanganana eran-tany, ao anatin'izany ny zotram-piaramanidina, ny seranam-piaramanidina, ny hotely sy ny lalamby, ny milina fikarohana, ny masoivoho fitsangatsanganana ary ny hetsika fitsangantsanganana. Nanamarika ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Amadeus fa mahita fikatsahana sy famandrihana avo lenta ary fitakiana toerana misy an'i Jamaika tany Royaume-Uni ary nilaza izany fa ny asan'ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny masoivohony ny Jamaica Tourist Board (JTB) miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe eo amin'ny tsena ary koa ny sarimihetsika James Bond vaovao.
Jamaika no trano ara-panahin'i Bond, miaraka amin'i Ian Fleming manoratra ny bokin'i Bond ao an-tranony, “Goldeneye.” Nalaina sary teto ihany koa ny sarimihetsika Bond Dr. No sy Live ary Let Die. For No Time to Die, nanorina trano tora-pasika fisotroan-drononon'i Bond tao San San Beach ao Port Antonio ireo mpamokatra sarimihetsika. Ny seho hafa nalaina sary tany Jamaika dia ahitana ny fiarahany tamin'i Felix namany sy ny fihaonany tamin'ilay 007 vaovao, Nomi. Jamaika koa dia nitombo avo roa heny ho an'ny sehatra ivelany any Kiobà.
Hanomboka handray sidina 16 farafahakeliny isan-kerinandro avy any Royaume-Uni i Jamaika amin'ity volana ity, hamerina ny nosy ho eo amin'ny 100 isan-jato eo ho eo ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina rehefa miverina indray ny isan'ny fizahantany. TUI, British Airways ary Virgin Atlantic dia manolotra tsy an-kiato sidina eo anelanelan'ny UK tanànan'i London, Manchester, Birmingham ary Jamaika.
Ny minisitry ny fizahantany Edmund Bartlett dia mitarika ekipa avo lenta avy amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy ny JTB ao amin'ny World Travel Market, iray amin'ireo seho ara-barotra iraisam-pirenena lehibe indrindra eran-tany. Bartlett dia niaraka tamin'ny Filoha JTB, John Lynch; Talen'ny fizahantany, Donovan White; Mpanolotsaina ambony sy stratejika, Minisiteran'ny Fizahantany, Delano Seiveright; ary Talem-paritry ny JTB any Angletera sy Eoropa Avaratra, Elizabeth Fox.